बजेट विमर्श : कुन क्षेत्रमा बढ्यो ! कुन क्षेत्रमा घट्यो ? | शुभयुग
बजेट विमर्श : कुन क्षेत्रमा बढ्यो ! कुन क्षेत्रमा घट्यो ?
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ १६, शुक्रबार (२ साल अघि)
३२५ पाठक संख्या
१६ जेठ, काठमाण्डौ – कसिलो बजेटका बावजुद १६ मन्त्रालयको खर्चमा बजेट वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल पुनर्निमाण प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने समानीकरण अनुदान रकम र संघीय मन्त्रालयसहित २६ क्षेत्रमध्ये उक्त संख्याको मन्त्रालयगत खर्चको आकार बढाइएको हो । बाँकी १० क्षेत्रको बजेट भने घटाइएको छ ।
यो वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट अघिल्लो वर्षजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्ष १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ५ प्रतिशत बढी हो ।
प्रदेशतर्फ जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई करिब ८ अर्ब २१ करोडले बढाएर ६५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको यो वर्षको बजेट भने ह्वात्तै घटेको छ । भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा अघिल्लो वर्षको १ खर्ब ४१ अर्बको बजेट घटाएर यो वर्ष ५५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेटलाई यो वर्ष ९० प्रतिशतले बढाइएको छ । अघिल्लो वर्ष २२ अर्ब ६६ करोड रहेको यो क्षेत्रको बजेट यो वर्ष ४३ अर्ब ८ करोड पुर्याइएको हो ।
बहुप्रतिक्षित कृषि क्षेत्रमा यो वर्ष १९ प्रतिशतले बढाएर २४ अर्ब ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
संघीय मामीला र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट यो वर्ष घटेको छ । क्रमशः ३८ अर्ब ९१ करोड र ३७ अर्ब ८० करोड बजेट छुट्टाइएको दुई मन्त्रालयको बजेट क्रमशः ४.९ र ७.१६ प्रतिशतले घटेको हो ।
यो वर्ष संस्कृति मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा बढी बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको यो मन्त्रालयको बजेट ३४४ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ६२ करोड पुगेको हो ।
बन तथा वातावरण बन्त्रालयको बजेट ५ प्रतिशत घटेर १४ अर्बमा सीमित हुँदा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेट करिब दोब्बर भएको छ । यो मन्त्रालयलाई यो वर्ष १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
यो वर्ष युवा तथा २ अर्ब ३६ करोड, महलिा वालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब १४ करोड तथा मानून मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रातोपाटी बाट साभार ।